नेकपामा सहमतिको प्रयास : ५ बुँदे ड्राफ्ट छलफलमा !
पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको समयमा नेकपाभित्र सहमतिका लागि भन्दै पाँचबुँदे ड्राफ्टमा अनौपचारिक छलफल शुरु भएको छ । पार्टीलाई फूटबाट जोगाउन र सहमति खोज्न भन्दै मध्यमार्गी समाधानको पहल शुरु भएको हो ।
अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'बीच आइतवार भएको भेटवार्तामा ठोस सहमति भएन । सहमतिका लागि सहमति मात्र भयो । थप सहमतिका लागि ४ जना नेतालाई जिम्मा लगाइएको छ । सहमतिका लागि दोस्रो तहका नेताहरुले पनि विभिन्न विकल्पमा छलफल गरिरहेका छन् ।
‘सहमतिका लागि सम्भावित मिलनबिन्दु’ नाम दिइएको ड्राफ्टलाई आधार बनाएर छलफल शुरु भएको स्रोतको दाबी छ । अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्रीबाट ओलीको राजीनामा माग गरेपछि नेकपाको विवाद बल्झिएको थियो ।
सहमतिका लागि दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले छलफललाई तीव्र बनाएका छन् । स्रोतका अनुसार नेकपाभित्र सहमतिका लागि ५ बुँदमा छलफल भइरहेको छ । ती ५ बुँदालाई थप व्याख्या गर्नेगरी सहमतिको प्रस्ताव तयार गर्न मध्यमार्गी नेताहरूले प्रस्ताव गरेका हुन् ।
प्रचण्डलाई पूर्ण कार्यकारी अध्यक्ष
पार्टीको बैठक संचालन तथा पार्टीको कामकारवाहीका लागि सम्पूर्ण स्वतन्त्रतासहित प्रचण्डलाई पूर्ण कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने सो प्रस्तावमा उल्लेख छ । २०७६ मंसिरमा सचिवालय बैठकले प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार दिएपनि उनले सो अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका थिए ।
सहमतिका लागि प्रस्तावित यो बुँदालाई व्याख्या गर्दै ‘बैठक संचालन गर्न र पार्टीका अरु गतिविधि संचालन गर्न परामर्श नचाहिने, एक्लैले निर्णय गर्न सक्ने’ प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा थप व्याख्या आवश्यक रहेको नेताहरूको निष्कर्ष छ ।
माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा 'सरकार संचालन संयन्त्र'
सहमतिका लागि अगाडि सारिएको ड्राफ्टको अर्को बुँदामा सरकार संचालनका लागि संयन्त्र बनाउने उल्लेख गरिएको छ । सरकार संचालनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम रहेको संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकार संचालनका लागि बनाइने संयन्त्रको सम्भावित अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई बनाउने प्रस्तावमा रहेको स्रोतको दावी छ । यसको व्याख्यामा ‘सरकारका महत्वपूर्ण काम, कारवाही, निर्णय र नियुक्तिका बारेमा संयन्त्रमा छलफल गरेपछि मात्र सरकारले निर्णय गर्ने’ उल्लेख छ ।
सम्मानजनक हैसियतसहित मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन
सहमतिका लागि प्रस्तावित ड्राफ्टको तेस्रो बुँदामा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गर्ने उल्लेख छ । सबै नेताको भावना सम्वोधन हुनेगरी मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गरेर सरकारलाई गति दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।
असमान नियुक्ति बदर गर्ने,पुनर्नियुक्ति गर्ने
सहमतिका लागि अगाडि सारिएको प्रस्तावमा यसअघि भएका असमान नियुक्ति खारेज गरेर पुन नियुक्ति गर्ने भन्ने उल्लेख छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सल्लाहकारहरु तथा अन्य सुविधाका पदमा रहेका नियुक्तिमा हेरफेर गर्ने प्रस्तावमा रहेको विवाद समाधानमा क्रियाशील रहेका एक मध्यस्थकर्ताले जानकारी दिए । नेकपाले सरकारको नेतृत्व गरेका ६ मध्ये २ वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री हेरफेर गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधिसम्मत पार्टी संचालन,जिम्मेवारी बाँडफाँड
सहमतिको पाँचौ नम्बर बुँदामा पार्टीलाई विधीसम्मत ढंगले संचालन गर्ने उल्लेख छ । यसका लागि जिम्मेवारी नपाएका सदस्यहरुलाई सम्मानजनक जिम्मेवारी दिने उल्लेख छ । खासगरी मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले पाएको दोहोरो जिम्मेवारी अन्त्य गरेर उनीहरुलाई एक पद दिने प्रस्तावमा उल्लेख छ । कतिपय मुख्यमन्त्रीले सम्बन्धित प्रदेशको पार्टीको इन्चार्जको समेत भूमिका निभाएका छन् ।
स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले आलोचकलाई भने– मति सुध्रियोस् !
सरकार घरघरमा पुगेर सेवा दिइरहेको छ : मुख्यमन्त्री राई
सुशील कोइरालाको योगदान स्मरण
कांग्रेसका १२ केन्द्रीय सदस्यद्वारा हालै गठन गरिएका ...
नेपाली लोकतन्त्रलाई बदनाम गर्ने यी राजनीतिक हर्कत
साउन ३०, २०७७
पहिरामा परेर एकै दिन १७ को मृत्यु, २८ बेपत्ता
पूर्वराष्ट्रपति मुखर्जीको अवस्था खराब नरहेको छोरीको भनाई
भेनेजुएला हिँडेको इरानी कार्गो ट्यांकर अमेरिकी नियन्त्रणमा
एक लाखभन्दा बढी चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्न बाँकी
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश - शुक्रवार रातिदेखि काठमाडौँ जिल्लामा यी क्रियाकलापहरू गर्न पाइँदैन
त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत नौबिसे सडकखण्डमा हटाइयो पहिरो, यातायात सञ्चालनमा
लिदी पहिरो : रातभर बाहिर सुतेर बिहान फर्किएका थिए गाउँले
भारतलाई पाकिस्तानको चेतावनी – ५ वटा लडाकु विमान आउन् कि ५ सय वटा, हामी तयार छौं
गृहमन्त्री बादल सेनाको हेलीकप्टर लिएर राहतसहित पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा